कांग्रेसबाट को को बन्दै छन् मन्त्री ? सुचिसहित — Imandarmedia.com
कांग्रेसबाट को को बन्दै छन् मन्त्री ? सुचिसहित
काठमाडौ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम भागबन्डाका आधारमा टुंगो लगाएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका शीर्ष नेताबीचको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री बन्नेको टुंगो लागेको हो।